Muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, isu tinowanzoshandisa tepi, uye munzvimbo dzakasiyana, mhando yetepi inoshandiswa yakasiyana zvakare. Kunyangwe iyo tepi iri nyore kushandisa, pane dambudziko rakajairika, ndokuti, zvakaoma kwazvo kubvisa zvisaririra zvakasara netepi mushure mekushandisa. Vanhu vazhinji vanosarudza kushandisa tauro nyoro ...
Kana zvasvika kune aluminium tepi, ndinotenda iwe unofanirwa kunge uchiziva nayo. Muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, tinogona kazhinji kuona zvigadzirwa zvemagetsi zvigadzirwa. Izvi zvinotevera sumo pfupi yekushandiswa kwealuminium tepi? Chekutanga pane zvese, iyo tepi yealuminium inogadzirwa yemhando yepamusoro yekumanikidza-inonzwa adhesi ...
Kugadzirwa uye hunhu hweyakajairika kraft bepa tepi
Iyo kraft bepa tepi yatinowanzo shandisa inogadzirwa neye kraft bepa sechinhu chepasi, chakaputirwa nekunamatira kwemvura-yakasungika uye kuomeswa. Ikozvino yakagadziriswa kuita kraft bepa tepi yatinoziva. Aya matepi epuratifomu ane adhesion yakasimba, uye nekuda kwekushandisa kwepa kraft, tensile stre ...
Aluminium Foil Girazi Yejira Tepi, Yakapetwa-Yakatsigirwa Yakasimbiswa Aluminium Foil Kutarisana, Iyo Inopisa Sei Inogona Aluminium Foil Tepi Tora, Imwe-yakatsigira Aluminium Foil Kutarisana, Tepi, Intertape Polymer Boka Aluminium Foil Tepi,